ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်း | Rieter Professional Credit Bureau
Rieter Search ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်
ကလေးများအိမ်မှထွက်ပြေးသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်မှထွက်ခွာသွားခြင်း၊ အတန်းဖော်ဟောင်းများ၊ အဝတ်ဟောင်းများဟောင်း၊ အရင်ချစ်သူဟောင်းများ၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောနှလုံးကြေကွဲသူများ၊ ကြွေးမြီများနှင့်ထွက်ပြေးကြသူကြွေးရှင်များ၊ အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ၏အကြီးအကဲ၊ မကြာသေးမီကအရာဝတ္ထု၏အခြေအနေ ... လူများသည်လူနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်ပြfindနာများကိုရှာဖွေရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါ၊ သင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်“ လူများအားအသိပေးစာတင်ခြင်း” ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ “ ပျောက်ဆုံးနေသူများကိုအစီရင်ခံခြင်း” သည်သင့်အားမကူညီနိုင်ပါ။ သင့်အားပေးနိုင်ပါသည် အထိရောက်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သောအကူအညီနှင့်အကူအညီ
လူတွေကိုရှာဖွေဖို့လူတွေကိုခြေရာခံတာဟာသင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ကိုရှာဖွေနိူင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူအများစုမှာလမ်းကြောင်းတွေ၊ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိကြတဲ့အတွက်လူတွေကိုရှာဖွေတာကပိုခက်ခဲလာတယ်။ လူများအားရှာဖွေခြင်းနှင့်လူများကိုရှာဖွေခြင်းသည်ရဲသို့မဟုတ်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံရန်အခြားလမ်းကြောင်းများကိုလည်းသင်တောင်းခံနိုင်သည်။ သို့သော်အထွေထွေခြေရာကောက်အဖွဲ့သည်စိတ်အားထက်သန်မှုကင်းမဲ့သောကြောင့်လူများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုမကြာခဏလွဲချော်သည်။ Rieter ခရက်ဒစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်လူများအားရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးအရင်းအမြစ်များနှင့်လမ်းကြောင်းများသာမကလုပ်ငန်းကိစ္စများကိုတက်ကြွစွာကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသည့်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခြင်းသည်သုံးစွဲသူ၏ကာလကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးစေနိုင်သည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်
အကယ်၍ အခြားပါတီသည်တမင်တကာပုန်းအောင်းနေပြီးအတွင်းလူသည်သူ၏တည်နေရာကိုတမင်တကာကူညီသည်ဆိုပါကတစ်ယောက်ယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။ Rieter ခရက်ဒစ်တွင်အထူးချန်နယ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစွာပါ ၀ င်သည်သာမကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိကျမှန်ကန်စွာ၊ လျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာရှာဖွေနိုင်ပြီးသင်၏ခြေရာကောက်ပြproblemနာကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။
အသက်ငယ်ရွယ်သောကလေးများနှင့်ပုန်ကန်သောဆယ်ကျော်သက်များ၊ သူတို့၏စိတ်များသည်အပြည့်အ ၀ ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမှားနှင့်အမှန်ကိုနားမလည်သောကြောင့်သူတို့သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်နားလည်မှုလွဲခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်သို့မသွားခြင်းကြောင့်အိမ်မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ စိတ်သောကရောက်နေသည့်မိဘများသည်ယခုအချိန်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုမသိပါ။ ပျောက်ဆုံးနေသူများကိုသတင်းပို့ရန်အချိန်တိုလွန်းသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသောမိဘများသည်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်။ သူတို့၏ကလေးများအိမ်ပြန်လာရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်သတင်းရောက်လာသောအခါကလေးများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်နေကြသည်။ သူသည်မပြုပြင်နိုင်သောစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် Rieter Credit Co. , Ltd. သည် "ကလေးသူငယ်များ၏နေရာဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး" နှင့် "လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လက်ချောင်းများရှာဖွေခြင်း" ဝန်ဆောင်မှုများကိုအထူးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အထူးကိစ္စများတွင်ပါတီနှစ်ခု၏အထွေထွေမန်နေဂျာများကို စုစည်း၍ ပါတီနှစ်ခု၏စွမ်းရည်များကိုပေါင်းစည်းရန်နှင့်ပုန်ကန်သူများကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ထွက်ပြေးသွားသောကလေးများ။
အဟောင်းမိဘများအိမ်မှထွက်ခွာသည့်အခါအိမ်ပြန်လမ်းကိုရှာ။ မရပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်နေသောမိသားစု ၀ င်များသည်ဤအချိန်တွင်မည်သူကိုရှာရမည်ကိုမသိရှိကြပါ။ ပျောက်ဆုံးနေသူများကိုအစီရင်ခံရန်အချိန်တိုလွန်းသည်။ ပျင်းစရာကောင်းပြီးထိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်သတင်းလာသောအခါနောင်တရတတ်ကြသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုမိဘများကိုရှာဖွေရန်စိတ်ပူပန်စွာစောင့်နေရန်မလိုချင်ပါ။ ဤကဲ့သို့နောင်တပြန်မဖြစ်စေရန် Rieter Credit Co. , Ltd. ၏ပျောက်ဆုံးနေသောမိဘများအားအလျင်အမြန်ရှာရန်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။
3 ခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူဇနီးသည်သည်အိမ်မှထွက်ခွာပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်
39 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းတို့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးကွာရှင်းပြီးနောက်သူမ3သားလေးနှင့်အတူထွက်ပြေးခဲ့သည်။ 18 မှပစ္စုပ္ပန်အထိသတင်းအချက်အလက်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ မိသားစုကရဲကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည်3နှစ်အရွယ်ကလေးကိုယူခဲ့သောကြောင့်ရဲများသည်မရဲရဲခဲ့ကြပါ။ သတိပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်အနီးအနားရှိမော်နီတာကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးပြီးလူအများကရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
လင်ယောက်ျားကသူ့ဇနီးနှင့်3နှစ်အရွယ်သားကိုကြင်နာစွာကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သူမကွာရှင်းပြတ်စဲရန်ဆူညံနေသောကြောင့်သူမတစ်ဝက်၌ငိုကြွေးခဲ့သည်။ သူမသားကိုအိမ်မှခေါ်ထုတ်သွားခဲ့သည်။ သူတို့နှင့်သူမဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပါ။2နေ့တွင်မိခင်နှင့်သား, Taichung မီးရထားဘူတာတွင်ရပ်ထားသည့်စက်ခေါင်းကိုမော်နီတာကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အမေနှင့်သားတို့သည်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုမသိရှိကြပါ။
ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆူညံနေသောလူကြီးများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစိတ်ဆိုးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းမိခင်ကသူ့သားနှင့်အတူအိမ်မှထွက်ခွာသည်။ ကလေးသည်မသိဘဲမိသားစုသည်အလွန်စိုးရိမ်နေသည်။ ဤအချိန်တွင်အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းကသင့်ကိုမကူညီနိုင်လျှင်သင်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက် "သင်၏ဇနီးနှင့်ခင်ပွန်းကိုရှာဖွေရန်" Rieter Credit Bureau ကိုသင့်အားအပ်နှင်းနိုင်သည်။ ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်သည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုအလျင်အမြန်ရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောဆိုရန်မျှော်လင့်။ မမေ့နိုင်သောပထမ ဦး ဆုံးချစ်မြတ်နိုးသူကိုရှာဖွေနေသည်
ရှည်လျားသောချစ်သူရုတ်တရက်အငွေ့ပျံသွားပြီးသူ့ကိုသူသည်နိုင်ငံတကာအကွာအဝေးကို ဖြတ်၍ ပြန်လာနိုင်မည်လော။
ခရီးသွားကလေးတစ် ဦး ၏ Adventures ကို! ကျွန်တော့်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့
အားကောင်းသော Douyin သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေသောခင်ပွန်းကိုရှာဖွေသည်
Xiaoxun Credit Co. , Ltd. သည်သုံးစွဲသူများအား NT $ 75 ဖြင့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုချက်ချင်းရှာဖွေရန်တစ်ယောက်ယောက်ကိုစေလွှတ်ရန်အကြွေးဌာနသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာရန်ခရက်ဒစ်ဗျူရိုအားအပ်နှင်းလို! အကြွေးတင်သောကုမ္ပဏီကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။